Hello Nepal News » जोभिच इज ब्याक : रियल मड्रिडमा दुई सिजनमा २ गोल, फ्रान्फुर्टमा २८ मिनेटमा २ गोल !
जोभिच इज ब्याक : रियल मड्रिडमा दुई सिजनमा २ गोल, फ्रान्फुर्टमा २८ मिनेटमा २ गोल !
सर्बियाका युवा फरवार्ड लुका जोभिच दुई सिजनसम्म रियल मड्रिडमा रहँदा सधैंजसो छायाँमा परे । सिधै भन्दा प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले उनलाई पूरै बेवास्ता गरे । उनलाई आकलझुकल बाहेक खेल्नै दिएनन् । करिम बेन्जेमाको पोजिसनबाट खेल्ने जोभिच जिदानको योजनामा परुन् पनि कसरी ? जबकि, बेन्जेमा उनका प्रिय खेलाडी हुन् । बेन्जेमालाई बेन्चमा राखेर जिदानले दुई सिजनको बीचमा कहिल्यै पनि जोभिचलाई सुरुआतमा खेलाएनन् ।
जोभिचलाई रियलले सन् २०१९ मा महँगो मूल्यमा जर्मन क्लब फ्रान्कफुर्टबाट भित्र्याएको थियो । तर, उनले ला लिगा पुगेपछिे नियमित खेल्न नपाएपछि र आफ्नो प्रभाव जमाउन नसकेपछि रियलले ३ दिनअघि मात्रै उनकै जहाँबाट आएको त्यही क्लबमा लोनमा पठायो । र, रियलबाट फ्रान्कफुर्ट फर्किएपछि पहिलो खेलमै जोभिचले सनसनी मच्चाइदिए । मानौं कि, रियलमा खेल्दा उनका हातखुट्टा बाँधिएका थिए, फ्रान्कफुर्टमा हातखुट्टा नबाँधी खेल्न पाए ।
रियलमा छँदा दुई सिजनमा ला लिगामा कूल ३२ खेलबाट मात्रै २ गोल गरेका २३ वर्षीय युवा फरवार्डले पूर्वक्लब फ्रान्कफुर्ट फर्किएपछिको डेब्यु खेलमै २ गोल हाने, त्यो पनि बेन्चबाट छिरेर । फ्रान्कफुर्ट छाडेर रियल गएपछि करिअर नै डामाडोल अवस्थामा रहेका बेला खेल्नै नपाएपछि आधा सिजनका लागि लोनमा फ्रान्कुफर्ट नै फर्किंदा जोभिचको कमब्याक निकै राम्रो रह्यो । उनको २ गोल र प्रदर्शनले मिडियामा पनि राम्रै वाहवाही पायो ।
गत राति बुन्डेलिगामा फ्रान्कफुर्टले आफ्नो घरेलु मैदानमा पहुना टोली शाल्केलाई ३–१ ले हराउँदा जोभिच नै नायक बने । खेलको ६२औं मिनेटमा इरिक ड्रमको स्थानमा उनी मैदान छिर्दा खेल १–१ थियो । तर, मैदान छिरेको १० मिनेटमै उनले गोल गर्न सफल भए । उनको गोलपछि टिमले खेलमा २–१ को अग्रता लिएको थियो । त्यसपछि इन्जरी समयको पहिलो मिनेटमा उनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि खेल फ्रान्कफुर्टले ३–१ ले जित्यो ।
रियल मड्रिडमा दुई सिजन खेल्दा ३२ लिग खेलमा मौका पाउँदा २ गोल गरेर फ्रान्कफुर्ट फर्किएका जोभिचले पूर्वक्लबमा मात्रै २८ मिनेट खेलेर २ गोल गरे । उनले पूर्वक्लबको फिर्ती र डेब्युलाई सुखद् मात्रै बनाएनन्, रियल मड्रिड र त्यहाँका प्रशिक्षकलाई निकै गतिलो जवाफ पनि मैदानबाटै पठाएका छन् ।
फ्रान्कफुर्टमा पहिलो खेलमा जोभिचले जसरी खेले र गोल गरे, उनले त्यही लय र गति काम राखे उनले सिजनका बाँकी खेलमा प्रशस्तै गोल गर्ने देखिएको छ । विगतमा उनले फ्रान्कफुर्टका लागि ४८ खेलबाट २७ गोल र १३ असिस्ट गरेका थिए । जोभिच फ्रान्कफुर्टमा यो सिजनको अन्त्यसम्मका लागि मात्रै रहनेछन् । त्यसपछि उनी रियल नै फर्किनेछन् । वा, रियलले चाहेमा उनलाई स्थायी रूपमा फ्रान्कफुर्टलाई वा अन्य कुनै पनि क्लबलाई बेच्न पनि सक्छ ।
प्रकाशित मिति ५ माघ २०७७, सोमबार ०८:५२